Gudoomiyaha Buurhakaba ee Maamulka Koonfur-galbeed oo Isku day dil ka badbaaday. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Gudoomiyaha Buurhakaba ee Maamulka Koonfur-galbeed oo Isku day dil ka badbaaday.
On Nov 30, 2017 975 0
Wadada xiriirisa magaalooyinka Baydhabo iyo Buurhkaba oo kawada tirsan gobolka Baay ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa gelinkii dambe ee shalay waxaa ka dhacay dagaal adag oo dhexmaray ciidamo katirsan Koonfur galbeed iyo Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Ciidamada Mujaahidiinta oo helaya macluumaadyo qarsoodi ah ayaa kamiin ka galay meel u dhow deegaanka Mooda-moode ee duleedka Baydhabo, waxaana ay rasaas huwiyeen ciidamo la socoday gudoomiyaha Buurhkaba ee maamulka koonfur galbeed.
Dagaalka oo in muda ah socoday, islamarkaana ciidamada dowladda ee la socoday gudoomiyaha ay gurmad dirsadeen ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo dhabarka loo saaray ciidamada Koonfur galbeed.
Wararka la helayo waxay sheegayaan in gudoomiyaha Buurhkaba uu soo gaaray dhaawac, halka saraakiil ciidan oo la socotay qaarkood ay dhinteen.
Dagaalka waxay Mujaahidiintu sidoo kale adeegsanayeen miinooyinka dhulka lagu aaso, kuwaas oo sababay in qaar kamid ah gawaarida ciidamada dowladda la bas beeliyo, waxaana xusid mudan in Ciidamada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay gacanta ku dhigeen mid kamid ah gawaarida ciidamada dowladda.